Raad Raac News Online – Barlaamanka oo Su’aalo Weydiinaya Wasaaradaha Dowladda Dhexe Qaarkood.
Barlaamanka oo Su’aalo Weydiinaya Wasaaradaha Dowladda Dhexe Qaarkood.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa fadhi uu maanta ku yeeshay xarunta Golaha shacabka waxaa ku hortagay Ra’iisul Wasaare kuxigeenka ahna Wasiirka Arrimaha Dibada Fowziyo Yuusuf Xaaji Aadan iyo Wasiirka Gaashaandhiga C/xakiin Xaaji Maxamuud Fiqi.
Kulanka Baarlamaanka oo uu shir gudoominayay Gudoomiyaha Baarlamaanka Prof. Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa su’aalooyin ku aadan howlaha wasaaradahooda laga weydiiyay labada Wasiir.
Ugu horeyn Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa su’aalooyin weydiiyay Wasiirada Arrimaha dibada Fowziyo Yuusuf Xaaji Aadan, iyadoo wax laga weydiiyay hantida dowladda leedahay ee dibada yaala, gaar ahaan waxa ay ka ogtahay Wasaaradeeda kireynta dhismaha Safaarada Soomaaliya ku leedahay dalka Talyaaniga.
Fowziyo ayaa sheegay in arrinta kireynta Safaarada Soomaaliya ku leedahay Talyaaniga ay ka horeysay, isla markaana loo saaray gudi ayu madax u tahay oo qaabilsan sidii hantida qaranka, sida dhismayaasha safaaradaha, xarumihii dowladda, diyaaradihii, maraakiibtii dib loogu soo celin lahaa.
“Aniga arrintaas waa iga horeysay, aniga iyo Ra’iisul Wasaaraha mowqif baan ka qaadanay arrinta ku saabsan hantida qaranka, gudi aan madax u ahay ayaa loo saaray sidii loo baari lahaa hantidii luntay, sida maraakiibtii, diyaaradihii iyo hantidii dalka ka maqneyd”ayay tiri Fowziyo Yuusuf Xaaji Aadan oo ka jawaabeysay su’aalaha ay weydiinayeen Xildhibaanada Baarlamaanka.
Sidoo kale Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa su’aalo weydiiyay Wasiirka Gaashaandhiga C/xakiin Xaaji Maxamuud Fiqi, kaasoo ku saabsanaa xarigii wariyaha BBC-da Ibraahim Maxamed Aadan oo todobaadkii hore la sii daayay.
C/xakiin Fiqi ayaa sheegay xariga Wariyaha BBC-da ay ka dambeysay markii uu tabiyay war hal dhinac ah, isagoo sheegay in Ibraahim uu shaqada ku cusbaa, isla markaana tababar xirfadeed uusan laheyd.
Dhinaca kale Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Prof. Jawaari ayaa sheegay in gudi farsamo loo saari doono arrimaha xadgudubyada saxaafada, isagoo sheegay inay jiraan in saxaafada ay xadgudub sameeyaan, isla markaana loo baahan yahay in ay anshaxa ilaaliyaan, waxaana uu ka dalbaday gudiga loo saaray inay arrimaha saxaafada fiiro gaar u yeeshaan.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhowaan la filayaa inuu dib u eegis ku sameeyo sharciga saxaafada ee horay u dejisay dowladdii hore ee C/llaahi Yuusuf, iyadoo Wasaarad Warfaafinta ay wado shuruuc ku saabsan saxaafada.